Tony Jenkins: waxbarashada ku saabsan iyo nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
"Sida waxbarashada labadaba ku saabsan iyo nabadda, nuxurka waxbarashada nabadda (hore, hadda, mustaqbalka) looma kala saari karo xaqiiqda bartaha."
Horraantii 1980-meeyadii, hormuudka waxbarashada nabadda Betty Reardon waxay ku baaqday in la horumariyo waxbarashada nabadda oo dhammaystiran, hab dhammaystiran oo is-dhexgal ah oo inta badan lagu dabaqo raadinta dhaqanka nabadda, iyo suurtogalnimada in la mideeyo goob ka kooban habab badan oo u muuqda kuwo aan isku xirnayn. Wax barashada nabadeed ee dhameystiran waxay salka ku haysaa waxbaris wax ku ool ah oo wax tar leh Waxay si gaar ah mustaqbalku u janjeedha, raadinta kobcinta awoodaha nabadeed ee gudaha kuwaas oo muhiim u ah ficil siyaasadeed dibadeed oo lagama maarmaan u ah isbedelka bulshada iyo siyaasadeed. Gelitaankani wuxuu soo jeedinayaa waxbarashad nabadeed oo dhammaystiran oo ah tan ugu dhammaystiran, isbeddelka, iyo la-qabsiga ee barashada nabadda ee xaaladaha kala duwan; soo bandhigayaa qaar ka mid ah saldhigyadeeda aragtiyeed iyo kuwa wax ku oolka ah; wuxuuna tixgeliyaa u diyaargarowga lagama maarmaanka u ah barayaasha dhaqankiisa barbaarinta.
Jenkins T. (2019) Waxbarashada Nabadda ee Buuxda. In: Peters M. (eds) Encyclopedia ee Waxbarashada Macallinka. Guga, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_319-1
Baaq ku saabsan u Gudubka Dhaqanka Nabadda qarnigii XXI
Paulo Freire oo ku saabsan waxbarashada dhibaatada
December 4, 2018 Quotes 0
“Dhibaatooyinka xagga waxbarashada ah, dadku waxay horumariyaan awooddooda si ay si qoto dheer ugu fahmaan habka ay uga jiraan adduunka kaas iyo halka ay ku sugan yihiin; waxay u yimaadeen inay u arkaan adduunka in aysan u arkin runti dhab ah, laakiin ay tahay run dhab ah oo ku jirta geedi socodka, isbadal. ” - Paul Freire [sii wad akhriska…]